China plastic square formwork mveliso kunye nabathengisi | Zhongming
Ukuveliswa kweMvelisoInkampani yethu iye yavelisa imveliso entsha, pp iglasi ifayibha elide formwork zokwakha formwork, usebenzisa ezinepolypropylene njengoko izinto isiseko, iglasi ifayibha kwaqinisa izinto edityanisiweyo, kunye nokuvunda ngokucinezela iimilo. Inkqubo ye-formwork ine-65 formwork formwork esemgangathweni kunye ne-65 aluminium formwork form. Ingasetyenziselwa iindibaniselwano ezahlukeneyo zokumelana nemithwalo eyahlukeneyo yokwakha.
Ixabiso eliphantsi kunye nokusebenza okulula zezona zinto ziluncedo kakhulu ze-pp izinto zeglasi yefayibha ende. Indleko yi-50% kuphela ye-aluminium formwork, ubunzima kuphela yi-19kg /, ubungakanani obuqhelekileyo yi-1200x600mm, ubunzima buyi-14kg kuphela, ulwakhiwo lukulungele, ukudiliza kunye nokudibanisa kuyakhawuleza, amandla kunye neyure-yomntu zigciniwe , ukwakhiwa kuququzelelwa, kwaye isantya sokwakha siphuculwe ngokufanelekileyo. Kwangaxeshanye, pp iglasi ifayibha formwork edityanisiweyo elide ukumelana asidi, kwealkali umhlwa, kulula ukuba ukucoca, ubomi inkonzo ende, kunye namaxesha kwakhona amaxesha angaphezu kwama-60.
Njengenkqubo yemveliso elula, akukho kulahlwa kwenkunkuma ezintathu. Emva kokufikelela kubomi benkonzo, inokuphinda isetyenziswe iphinde isetyenziswe njengemveliso yephaneli enobume bendalo. I-pp ende yeglasi yefayibha yokwakha ifomathi yokwakha, enezibonelelo zamandla amahle, ukwahlula okulula, ukubakho kweplastikhi elungileyo, isantya sokwakha okukhawulezayo, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo, kuya kufuneka kusetyenziswe ngakumbi kwimakethi yokwakha yale mihla egxininisa kulwakhiwo oluhlaza.
Ubungakanani bekholamu: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm
Uluhlu lokuhlengahlengisa iWaling: 200-600mm
Ubunzima bokukhanya, buluncedo. Iphaneli enkulu yi-120x60cm, ubunzima kuphela yi-14kg, enokuphakamisa kwaye isethwe ngumntu omnye ngokulula
Ukuseta ngokulula. Ubungakanani obahlukeneyo beepaneli zinokutshixwa ngokuqinileyo ngepini. Iiphaneli zineembambo ngasemva, ezenza ukuba inkqubo ingadingi iibhloko zomthi zemveli kunye nezipikili. Iipaneli zinoqiniso lombhobho wentsimbi, ziqinisekisa ukomelela kwenkqubo yonke.
Amandla aphezulu. Izinto ezibonakalayo zefomular formwork yi-PP (polypropylene) exutywe nemicu yeglasi ekhethekileyo, kwaye iqiniswe ngombhobho wentsimbi xa iphosa iplastikhi eyenza ukuba iiphaneli zibambe uxinzelelo oluphezulu. Izibambo zenziwe ngentsimbi, ipaneli nganye itshixiwe okungenani izikhonkwane ezi-4, ezenza ukuba yonke inkqubo yomelele ngokwaneleyo.
Ngaba ukusebenza ngaphandle kodonga ngokusebenzisa tie intonga. Ngenxa yokuba iqiniswe ngombhobho wensimbi yesikwere, eyonyusa kakhulu amandla ayo. Xa ixhaswe ngodonga, inokusebenza ngaphandleudonga ngentonga yokubopha.
Kulula ukwahlula kunye nekhonkrithi egqityiweyo. Ngenxa yonyango olukhethekileyo lomphezulu, ikhonkrithi ayinamathele kwifomwork, yiyo loo nto iipaneli zifuna ioyile ngaphambi kokuyisebenzisa, kwaye inokucocwa nje ngamanzi. Umphezulu wodonga owakhiwe yifomwork egudileyo, unokushiywa ngaphandle kokuphinda usebenze.
Aluminium formwork ulwakhiwo
Inkqubo yeAluminium Formwork
Aluminium ekubhalwe formwork
Iimodyuli zeAluminiyam zeFomwork Systems
Ringlock banikwe Izahlulo, Isibiyeli seBhendi yokuQinisa, Izixhobo zeKwikstage Scaffolding, Banikwe Screw Adjustable Screw, Heavy Duty Ringlock banikwe, Metal Cuplock banikwe,